फोटोशपको साथ तपाईको ग्रन्ज बनावट कसरी बनाउने: यो के हो | क्रिएटिव अनलाइन
यस्तो समय हुन्छ जब तपाईं इन्टरनेटमा फेला पार्ने टेक्सचर वा डिजाइनहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न, तर तपाईं आफैले यसो गर्न चाहानुहुन्छ। यो टाढा ल्याइएको छैन र, एक डिजाइनरको रूपमा, तपाइँ ग्राहक वा आफैंले स्क्र्याचबाट केहि सिर्जना गर्न आवश्यक भएको खण्डमा तयार हुनुपर्दछ। कसरी गर्न सकिन्छ ग्रन्ज बनावट, जुन एक हो जुन यस केसमा हामीलाई चिन्तित गर्दछ।
ग्रुन्ज बनावट सबैभन्दा अधिक प्रयोग गरिएको हो, जबकि यसको नामको रूपमा यो तपाईंलाई जस्तो लाग्दैन। तर तपाईं यो फोटोशपमा कसरी गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँ यसलाई गर्न कोशिस गर्न चाहानुहुन्छ, हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि तपाइँले यसलाई प्राप्त गर्न के गर्नुपर्दछ भनेर के-कस्ता कदमहरू छन्।
1 ग्रन्ज बनावट के हो
2 फोटोशपको साथ ग्रन्ज बनावट कसरी बनाउने
2.1 Adobe Photoshop र नयाँ फाइल खोल्नुहोस्
2.2 तह नक्कल गर्नुहोस्
2.3 क्लाउड फिल्टर
2.4 छवि परिमार्जन गर्नुहोस्
2.5 ग्रंज बनावट: समायोजन तह
2.6 चमक र कन्ट्रास्ट
2.7 ग्रन्ज बनावट: एक ढाँचा सिर्जना गर्दै
2.8 दाग हटाउन ब्रश उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
2.9 प्रमाणिकरण गर्नुहोस्
3 के हुन्छ यदि मलाई सामान्य परिणाम मनपर्दैन?
ग्रन्ज बनावट के हो
के तपाईंले कहिल्यै ग्रन्ज बनावटको बारेमा सुन्नुभएको छ? थाहा छ यो के हो? अहिले, यो त्यहाँ डिजाईनरहरू बीचको सबैभन्दा चर्को चलन हो। र यो किनभने यसले तपाईंलाई एक जैविक, वास्तविक परिणाम दिन्छ र प्रतिरोधको भावना दिन्छ। साथै, यो मुख्यतया पृष्ठभूमि को लागी प्रयोग भएकोले, यसले सेतो, खैरो वा ठोस पृष्ठभूमि प्रयोग गर्नबाट बचाउँछ, तर यसको सट्टामा अनौंठो ढाँचा सिर्जना गर्न धेरैको संयोजन प्रयोग गर्दछ।
त्यसैले हामी परिभाषित गर्न सक्छौं ग्रन्ज बनावटलाई दाग कागज जस्तो ढाँचाको रूपमा तर निश्चित तरिकामा जुन अप्रसन्न हुँदैन, मनपर्दैन सामान्य कुरा यसलाई कालो र सेतोमा गर्नु हो, तर वास्तविकतामा यो रंगमा पनि गर्न सकिन्छ, र यसलाई थ्रीडीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ रंग र डिजाइनको विभिन्न गहनता सिर्जना गर्न जुन थप गहिराई थप्दछ।
फोटोशपको साथ ग्रन्ज बनावट कसरी बनाउने
अब जब तपाइँ ग्रन्ज बनावटको बारेमा थोरै जान्नुहुन्छ, यो तपाइँलाई फोटोशपमा कसरी सिर्जना गर्ने सिक्ने समय भयो। अबदेखि हामी तपाईलाई भन्दछौं कि यो एकदम सजिलो छ, तर तपाईंले चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ ताकि गल्तीहरू नहोस् र यो जस्तो हुनुपर्दछ त्यस्तै बाहिर जान्छ।
Adobe Photoshop र नयाँ फाइल खोल्नुहोस्
तपाईंले लिनु पर्ने पहिलो चरण भनेको तपाईंको कम्प्युटरमा (पीसी वा ल्यापटप) खोल्नु हो तपाईंसँग फोटोशप प्रोग्राम छ र यसलाई नयाँ फाईल खोल्न दिनुहोस्। यहाँ तपाईले चाहानु भएको आकार निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि त्यहाँ कुनै खास नापहरू छैनन्, सबै कुरा तपाईलाई चाहिने कुरामा निर्भर गर्दछ।
अवश्य पनि, सामान्यतया बनावट प्राय: वर्ग ढाँचामा बनाइन्छ, पछि आकारलाई बढाउँदा वा तिनीहरूलाई नक्कल गर्दा तिनीहरू आयताकार भन्दा भन्दा धेरै राम्रोसँग मिल्दछन्।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं पृष्ठभूमि खाली छोड्नुहोस्।
तह नक्कल गर्नुहोस्
तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि तहहरूको मेनू फोटोशपमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ, र ग्रन्ज बनावट सिर्जना गर्दा त्यो कम हुने थिएन। तपाईले के गर्नु पर्छ त्यो सेतो लेयर बनाउनु हुन्छ जुन तपाईसँग छ।
यसैले, मा तह मेनु तपाईले दुई प्राप्त गर्नुहुनेछ, पहिलो, जुन सामान्यतया लक हुन्छ, र यसको प्रतिलिपि। त्यो प्रतिलिपिमा कर्सरको साथ इशारा गर्दै, तपाईंले दायाँ बटन क्लिक गर्नुपर्दछ र स्मार्ट वस्तुमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ।
त्यो लेयर स indicated्केत गरिएपछि, जसमा हामी काम गइरहेका छौं, तपाईंले पृष्ठभूमि र अग्रभूमि रंगहरू कालो र सेतो भएको निश्चित गर्नुपर्दछ। यदि होईन भने, तिनीहरूलाई एक क्षणमा परिवर्तन गर्नुहोस् र, अब हामी त्यस लेयरमा क्लाउड फिल्टर लागू गर्न गइरहेका छौं।
यस उद्देश्यका लागि, फिल्टर / व्याख्या / बादल। यसैले, तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ र यसले तपाईंलाई छवि देखाउँदछ जस्तो कि यो धेरै बादल भएको थियो (र धेरै बादलसँग नजिकै)।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि जति तपाई फिल्टर प्रयोग गर्नुहुन्छ, कारण अझ परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले यदि तपाई थोरै माग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले चाहानु हुने परिणाम प्राप्त नगरेसम्म प्रयास गरिरहनुहोस्। तपाईले यस जस्तो पाउनुहुने वस्तु अमूर्त बनावट हो, तर यो ग्रन्ज गर्नको लागि पहिलो चरण हो।
छवि परिमार्जन गर्नुहोस्
अर्को, र फेरि फोटोशपमा आउने फिल्टरहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले छविलाई थोरै परिमार्जन गर्नुपर्दछ, मुख्य रूपमा विकृत फिल्टरहरू प्रयोग गर्दै। उदाहरण को लागी: फिल्टर / विकृत / लहर।
हामीले यो छनौट गरेका छौं तर तपाईले चाहानु भएकोमा राख्न सक्नुहुन्छ। मात्रा को रूप मा, तपाईं आफूले चाहेको नम्बर (800 देखि सामान्यतया राम्रो देखिन्छ) र ठूलो आकार मा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ठीक दिन्छौं।
ग्रंज बनावट: समायोजन तह
अर्को, तपाईले समायोजन तह बनाउनु पर्छ। यो गर्नका लागि: तहहरू / समायोजन तह / स्तरहरू। ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् (किनकि बाहिर आउने मानहरू पर्याप्त छन् र प्रोपर्टीमा राखिन्छ, प्यानेलमा, स्तर २.। अन्तमा, पोष्टराइजमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं परिणाम पाउनुहुनेछ (जुन अहिले सम्म अन्तिम छैन।)
त्यसो भए तपाईंले लेयरको ब्राइटनेस र कन्ट्रास्ट परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले ब्राइटनेस कम गर्नुहोस् (to -१)) र कन्ट्रास्ट (+२०) लाई बढाउनुहोस्। यसले बनावटलाई अझ गहिराइमा देख्नेछ, तर चिन्ता नलिनुहोस्, यो अन्तिम होईन।
लेयर ब्लेन्ड दृश्यमा राख्नुहोस् र फिल्टर / शार्पन / थप शार्पनमा जानुहोस्।
ग्रन्ज बनावट: एक ढाँचा सिर्जना गर्दै
अब तपाइँले बनाउनु भएको ग्रन्ज बनावट समाप्त गर्न एक ढाँचा सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, फिल्टर / अन्य / अफसेटमा जानुहोस्। तपाईसँग किन छ? ठिक छ, त्यसकारण कुनाहरू केन्द्रमा रूपान्तरण हुन्छ, र यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने त्यस तरीकाले बनावट नक्कल गर्दा तपाईले यो ढाँचा दोहोर्‍याइरहेको जस्तो देखिदैन तर यो केवल एउटा मात्र हो जस्तो देखिन्छ।
दाग हटाउन ब्रश उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
समाप्त गर्नका लागि तपाईले भर्खरै गर्नु पर्छ डिजाइनमा गलत जस्तो देखिन्छ हटाउन ब्रश उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस्। र यो तयार हुनेछ।
एकचोटि तपाईलाई कस्तो लाग्छ परिणाम कस्तो भयो, यो समय क्लिक गर्नुहोस् सम्पादन / परिभाषित ढाँचा। यसले के गर्छ कि ग्रुनज बनावटको रूपमा त्यो ढाँचा बचत गर्दछ, त्यसैले यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने फेरि गर्नु पर्दैन।
अन्तमा, तपाईले नयाँ फाइल खोल्नु पर्छ, यदि तपाईको बनावटको आकार दुई पटक वा ट्रिपल भयो भने, प्याटर्न कसरी दोहोरिन्छ भनेर हेर्नका लागि र यदि त्रुटिहरू छन् भने तपाईले ग्राहकलाई प्रस्तुत गर्नु अघि यसलाई सुधार्नु पर्छ।
के हुन्छ यदि मलाई सामान्य परिणाम मनपर्दैन?
एक महान तपाईंको आफ्नै बनावट सिक्नको फाइदाहरू त्यो हो कि तपाईं ती फेला परेकोमा सन्तुष्ट हुनुपर्दैन, वा पत्रमा ट्यूटोरियल अनुसरण गर्नुहोस्। त्यो हो, जबसम्म तपाईंसँग यो बनावटको आधार छ, तपाईं परिमार्जनहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं परिणाम प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंलाई बढी सन्तुष्ट पार्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो चरणहरू थाहा पाउनु हो, र त्यसपछि तपाईले रचनात्मकता प्रयोग गर्नुपर्दछ त्यो ग्रन्ज बनावटको आधारमा तपाईंको आफ्नै डिजाइनहरू सिर्जना गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपको साथ कसरी तपाईंको ग्रन्ज बनावट बनाउने